HORDHAC : Sevilla VS Barcelona xidigaha seegaya kulanka, rikoorada labda dhinac iyo waxa kasta oo ku saabsan kulanka … – Gool FM
HORDHAC : Sevilla VS Barcelona xidigaha seegaya kulanka, rikoorada labda dhinac iyo waxa kasta oo ku saabsan kulanka …
Bashiir February 23, 2019
( Spain ) 23 Feb 2919 Barcelona oo bar bar dhac la dhaafi weyday kooxda reer Farnce ee Lyon kukan ka tirsanaa Champions league ayaa markale booqaneysa kooxda Sevilla kulan ka tirsan horyaalka (La Liga)
Sevilla ayaan qabin wax cabsi ah madaama lagu ciyaarayo garoonkooda oo ay ku badiyeen 9-kii kulan ee ugu dambeyey kulamda horyaalka .
Barcelona hadda ma saarna cadaadis xoogan madaama ay Real Madriid ay qasaartay kulankii dhawaan ay ka ciyareen horyaalka , farqiga dhibcaha ee labada koox u dhexeeya ayaana noqday 9-dhic oo ay Barca ka horeyso dhigeeda Madrid .
Sergio Escudero’ ayaa la buka dhaawac muuraqa ah waxaana suragal ah in booskiisa uu badalo Quincy Promes oo ku soo bilaaban kaara dambeedka bidix ee daafaca.
Daniel Carrico oo ka ciyaara daafac dhexe ayaa qaba dhaawac wax ayna u badantahay in booskiisa uu badali doono Gabriel Mercado.
Ever Banega ayaa ka soo laabtay ganaax waxa uuna diyaar u yahay in uu kulankan ka qeeb qaato halka Aleix Vidal iyo Guilherme Arana ay diyaar u yihiin in ay badalaan Jesus Navas hadii uu ku fashilmo dooqa macalinka .
Arturo Vidal iyo Sergi Roberto ayaa ku bohoowi doona qadka dhexe xili Arthur uu dhaawac ku seegayo kulanka caawa .
Nelson Semedo oo is muujiyey ayaa ka soo muuqan kara dambeedka daafaca midig , halka Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembele ay ku hardami doonana ka ciyaarista booska garabka bidix ee weerarka .
Kulanka : Sevilla VS Barcelona ( La Liga )
Goobta: Ramon Sanchez Pizjuan
Goorta: 6 :15 oo fiidnimo
Garsoorka: Antonio Mateu Lahoz.
Barcelona ayaa qasaaro kala kulantay kooxda Sevilla 81-jeer taariikhda kulamada horyaalka , mana jirto koox kale oo qasaaro intaa la eg ay kala kulantay.
Sevilla ayaa badisay kaliya hal kulan 23-kii kulan ee ugu dambeyey ee ay wajahdo kooxda Barcelona ( 5-bareejo iyo 17-qasaaro ) guul ay ka gaartao Barca waxa ay aheyd Octeber 2015 ciyaar 2-1 ku dhamaatay .
Kaddib baeejadii 0-0 ee ay la gashay kooxda Lyon Barcelona ayaa ku guul dareesan karta in ay dhalin weyso gool kulamo xiriir ah oo bananka tan iyo Junuary 2015 markaas oo ay awoodi weysay in labo kulan oo xiriir ah ay dhaliso gool kulamada bananka.
Sevilla ayaa guul daro la’aan ah 9-kii kulan ee ugu dambeyey ee ay ku ciyaarto garoonkeeda kulamada horyaalka .
Barcelona ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 8-kamida 11-kii kulan ee ugu dambeyey ee ay ka ciyaarta horyaalka La Liga . iyada oo ay xusid mudantahay in ay badisay 9-kamid 11-kulan ee ugu dambeyey ee ay wajahdo Sevilla dhamaan tartamada .